Fekitori Kuratidzwa - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Fekitori yedu iri muZhejiang China Iyo nzvimbo inoyevedza uye nzvimbo iri nyore kuAirport.Nevashandi vedu vehunyanzvi uye mitsara yekugadzira, zvichitigonesa kusangana nezvako zvigadzirwa zvinodiwa.
Huaxiajie inyanzvi inogadzira PVC madziro uye siringi mapaneru, PVC furo kuumbwa, PVC / WPC profiles uye PVC / WPC yekunze decking. Zvigadzirwa zvedu nharaunda zvine hushamwari.
Kupiwa mukana nenzvimbo izere, isu tinokuratidza zvese zvakanaka zvedu uye ngatikurei pamwechete. Ndine chokwadi chekuti tinogona kumisikidza hurefu-uye hushamwari hukama hwebhizinesi nekambani yako inokudzwa nekuda kwekuvimba kwako uye nebasa redu rakanakisa.
Isu tinogara tichitsvaga kwekuvimbika uye kwekudyidzana pamwe nevatengi pasi rese. Tinogona kuve vatengesi vako vakanakisa vane huwandu hwakawanda hweforoma zvigadzirwa. Uyezve isu tinokwanisa mukupa masevhisi eOEM neODM.
With kukura chakuvhuvhu musika, R & D redu kambani dhipatimendi muridzi mainjiniya nyanzvi kutarisa dzichiri zvigadzirwa.Dhipatimendi reR & D haringogamuchire mapurojekiti eOEM chete, asi zvakare rinogona kutora mapurojekiti eODM.Neye akanakisa mugadziri, isu tichagadzira akawanda akakwana madziro epaneru zvigadzirwa kusangana nezvinodiwa zvevatengi nemusika mune ramangwana.